चपाएको आवाजले झर्को लाग्छ? जाँच गराइहाल्नुहोस, मानसिक रोग लागेको हो – NepalAustralianews.com
चपाएको आवाजले झर्को लाग्छ? जाँच गराइहाल्नुहोस, मानसिक रोग लागेको हो
August 11, 2018 August 11, 2018 रोचक
खाना खान रेष्टुरेन्ट गएका बेला कसैले चम्चाले प्लेट बजायो भने, अम्ला पड्कायो भने गाला चड्काइदिउ जस्तो सबैलाई लाग्छ । घरमा परिवारजन वा साथीभाइले सँगै खाना खाइरहदा चपाएको आवाज निकाले भने पनि झनक्क रीस उठ्छ । त्यस्ता मानिसहरु त डायनोसरको युगकै झैं लाग्छ ।
यदि तपाईलाइ पनि त्यस्तै हुन्छ भने तपाईलाई पनि लाखौं मानिसहरुलाई जस्तै एक मानसिक रोग लागेको हो जस्लाइ ‘मिसोफोनिया‘ भनिन्छ । यो तथ्य भर्खरै अष्ट्रेलियाको न्यु क्यासल युनिभर्सिटिको सोधकर्ताहरुले पत्ता लगाएका हुन् ।
मिसोफोनिया भएका मानिसहरुलाई खाना खाएको, चपाएको, ठुलो स्वास फेरेको, डट्पेनको खिटिक खिटिक आवाज आदि सुन्दा रीस उठ्ने हुन्छ । यो रोग सन् २००१ मा पहिलोपल्ट पत्ता लागेको हो त्यसवेला यो रोगलाई अर्कै नाम दिइएको थियो ।
सोधकर्ताहरुले यस्ताखाले बिरामीहरुको मस्तिष्क स्क्यान गरि माथि लेखिएका आवाजहरुले बिरामीहरुको मस्तिष्कको गतिविधिमा परिवर्तन हुने पत्ता लगाएका हुन् ।
बलत्कारीलाई गोली हानी क्रेनले झुण्ड्याइयो